Vaky fasana teny Ankadimanga Ambohidrapeto : ripaka ny taolan-dava, karan-doha sisa tavela | NewsMada
Vaky fasana teny Ankadimanga Ambohidrapeto : ripaka ny taolan-dava, karan-doha sisa tavela
Hatairana niharo alahelo ny an’ireo fianakaviana tompon’ny fasana iray eny amin’ny kaominina Ankadimanga Ambohidrapeto, omaly. Saiky lany ripaka lasan’ny mpangalatra ny ankamaroan’ny taolan-dava tamin’ireo razana. Ny sasany, ny karan-doha sisa tavela…
Olona nandevina teo akaikin’ilay fasana no nahatsikaritra fa nivoha ny hidin’ilay fasana ka nampilaza haingana teo amin’ny manodidina. Ny teo amin’ny manodidina indray no nifampilaza tamin’ireo fianakaviana manana fasana eny an-toerana. Vetivety taorian’izay tonga nijery sy nanokatra ny fasany avokoa ny ankamaroan’ireo tompom-pasana nanamarina fa sao nisy namaky ny fasana. Samy nijery sy namoaka ny razana teo ivelan’ny fasana ireo fianakaviana marobe raha vantany vao nandre ity fahavakisana fasana ity. Nisy ireo nanararaotra namono lamba ireo razana sasan-tsasany efa niparitaka tao am-pasana.
Nahavariana ny mponina teny Ankadimanga ny fifanjevoan’ireo fianakaviana marobe mifanjevo samy nanamarina ny razana tao am-pasana. Navoaka tsirairay ny razana rehetra. Tao kosa ireo nanamafy ny hidim-pasana. Tsy tao an-tsain’ny olona intsony ny fisian’ny valan’aretina pesta fa samy nanao izay ho afany tamin’ny fikarakarana ny razany ireo fianakaviana. “Tsy misy fandraisana andraikitra mihitsy ataon’ny fanjakana manoloana ny firongatry ny halatra taolam-paty. Tratra ireo mpangalatra, saingy rava maina fotsiny fa tsy misy tohiny ny raharaha”, hoy ny sasany amin’ireo fianakaviana manana fasana eny an-toerana. Tsy fantatra kosa anefa izay tompon’antoka tamin’ity vaky fasana miharo halatra taolam-paty ity.
Efa nandraman’ireo jiolahy novohana ny fasana rehetra…
Tsikaritra tamin’ity vaky fasana, efa nandraman’ireo jiolahy novohana avokoa ireo fasana rehetra tao amin’ny manodidina, saingy tsy voavohan-dry zalahy afa-tsy fasana iray. Nilaza ho tsy nahatsikaritra na inona na inona rahateo ny sasany tamin’ireo mponina eny an-toerana manoloana izao vaky fasana izao. Manahy, araka izany, ireto fianakaviana marobe tonga nijery ny fasany ireto fa sao misy ifandraisany tamin’ny fahatrarana ireo taolam-paty milanja 1 taonina sy sasany tratran’ny kaompanian’ny zandarimaria tany Vatomandry, ny herinandro teo ity raharaha ity.
Tsy mety ahitam-bahaolana mihitsy ity resaka halatra taolam-paty ity. Ireny niaraha-nahita ireny ireo taolam-paty taonina iray sy sasany tratran’ny zandary tany amin’ireo jiolahy miisa 10. Raha atao ny kajikajy, razana firy izany no nahazoana ireo taolan-dava aman-taoniny ireo. Miraviravy tanana ny olona manoloana izany satria tsy mandry fahalemana intsony ny tanàna. Ao an-trano mitaintaina amin’ny firongatry ny fanafihana mitam-piadiana. Eny an-dalana mihorohoro amin’ny mpanendaka sy ny mpanao sinto-mahery. Maty mampitaintaina koa amin’ny fisian’ny mpangalatra taolam-paty. Tsy misy iainan’ny olona intsony manoloana izany rehetra izany.